Huawei Y210C ကို Root လုပ်နည်း - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Huawei Huawei Rooting နည်းလမ်းများ Huawei Y210C ကို Root လုပ်နည်း
Maung Pauk at 11:29:00 PM Huawei, Huawei Rooting, နည်းလမ်းများ,
pyaoaung: အကိုရေ huawei y210c ကအကိုပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာမရဘူး watiting for device ဆိုပြီးဘဲရပ်နေတယ် ပြိးတော့ unlockrootနဲ့လုပ်တာလည်း super userပေါ်ပြီးတော့မြန်မာဖောင့်ကမရဘူးroot access မရှိဘူးဘဲပြောနေတယ်ကူညီပါဦ
1. အရင်ဆုံး Driver တင်လိုက်ပါ.. မရှိရင် ဒီမှာ ဒေါင်းပါ..
2. Setting > Applications > Development > USB Debugging ကို အမှန်ခြစ်ထားပါ...
3. Setting > Applications >Unknown Source ကို အမှန်ခြစ်ထားပါ..
4.ဖုန်းကို အရင်ဆုံး fastboot mod မှာဝင်ထားပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ပါ...
5. အောက်ကလင့် တစ်ခုခုမှာ Y210C Root ကို ဒေါင်းပြီး Run လိုက်ပါ...
ကိုရွေးရင်တော့ ဖုန်းကို Root လုပ် မြန်မာဖောင့်နှင့် ကီးဘုတ်ထည့်ပေးမှာပါ။
ကိုရွေးရင်တော့ ဖုန်းကို Root မလုပ်ပဲ မြန်မာဖောင့်နှင့် ကီးဘုတ်ထည့်ပေးမှာပါ။
ကတော့ အပေါ်က ၁ နှင့် ၂ လုပ်လိုက်လို့ wifi error ဖြစ်ခဲ့ရင် ပြင်ဆင်ဖို့ပါ။
ကဲ ဒါဆိုရင်တော့ pyaoaung ရဲ့ Y210C ကို Root လို့ အဆင်ပြေလောက်ပါပြီ...
သင်ဆရာမြင်ဆရာအားလုံးကို Credit ပေးပါသည်။
Huawei, Huawei Rooting, နည်းလမ်းများ
Huawei Huawei Rooting နည်းလမ်းများ
chogyi May 24, 2013 at 6:25 PM
အက်ိုDriver တွေထဲကဘယ် driver ကို ဒေါင်းရမှာလဲ မသိဘူး ကျွန်တော် ကိုတချက်လောက်ပြောပြပေးပါနော်
tayokelay4 June 13, 2013 at 4:32 PM
tayokelay4 June 13, 2013 at 4:33 PM
ကျန်တော်ကို ဘားရှင်းလေးတင်ပေးပါအုံး Y210C
wifi error တက်လို့ fastboot ၀င်ပြီးပြန်လုပ်တာ computer မှာကြိုးတပ်လိုက်တာနဲ့ စက်က boot တက်တက်သွားလို့ လုပ်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ် ၊ တစ်ချို့က Fastboot driver တင်ရမယ်ပြောတယ် ဘယ်လိုတင်ရမလဲ ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပေးပါအုံးခင်ဗျာ.....ကိုပေါက်ရေ.....
Maung Pauk June 30, 2013 at 12:07 AM
ဖုန်းကိုပိတ်လိုက်ပါ.. Volume Down ခလုတ်နဲ့ Power ခလုတ်ကိုတွဲနှိပ်ပြီး ပါဝါဖွင့်ပါ.. Logo မှာရပ်နေရင် အဲဒါ fastboot mode ဖြစ်ပါတယ်. အဲဒီလိုဖြစ်နေမှ ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ရပါမယ်.. USB Debugging on ခဲ့ရဲ့လား စစ်ဖို့ မမေ့စေလိုပါ...
ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့မ၇ဘူး waiting for device ဘဲဖြစ်နေတယ်..